लेट 2007 मा, मोटर वाहन बजार, एक मोडेल माज्दा-2। ग्राहकहरु र विशेषज्ञहरूबाट प्रतिक्रिया एक हडताली डिजाइन र कम इन्धन खपत संग एक, गतिशील चुस्त र सहज कार रूपमा वर्णन गरिएको छ। कार अर्को फाइदा सुरक्षाको उच्च स्तर थियो। यो प्रमाण5ताराहरु परीक्षण यूरो NCAP को श्रृंखला फलस्वरूप प्राप्त को मूल्यांकन छ। यो सबै गर्न धन्यवाद, कार युरोप मा धेरै लोकप्रिय भएको छ। 2010 मा, सार्वजनिक आज र छलफल जाने जो मोडेल, को अद्यावधिक संस्करण प्रस्तुत गरियो।
यसको पूर्ववर्ती संग तुलना, नयाँ मोडेल माज्दा-2 थप खेलाडी उपस्थिति छ। डिजाइनर अलिकति पनि pentagonal कम रेडियेटर जंगला को आकार वृद्धि र उनको थप राहत गरे। औसत bodywork लाइन रूपमा अघि, चेसिस को पछिल्लो तिर बढ्दो। कार पार्किंग को मामला मा पनि गति प्रभाव एक प्रकारको सिर्जना रूपमा यो एकदम मूल देखिन्छ। कारण शरीर को मूर्तिकला तत्व गर्न प्रकाश र छाया को एक बरु असामान्य प्ले द्वारा प्रदान गरिएको छ। खरीदार को विकल्प एघार शरीर रंग दुई जो ब्रान्ड नयाँ छन् भिन्न, प्रस्ताव गरिएको छ।
को असबाब नवीनतम छ जो स्पर्श मनन गर्न मात्र सुखद, तर पनि माज्दा-2 उच्च गुणस्तरीय माल र सजावटी तत्व को संस्करण। सामान्य मा, भित्री डिजाइन को आधारभूत विचार स्पेस को आन्दोलन कुरा, अवधारणा थियो।
अगाडि प्यानल बिस्तारै किनाराको गर्न केन्द्र देखि tapered छ, त्यसैले यो एकदम संकुचित कार छ जस्तो देखिन्छ। केन्द्र कन्सोलमा डिजिटल सिस्टम नियन्त्रित छन्। प्यानल Chrome लाइनहरु संग एक चमकदार काले डिजाइन पाए। सीट असबाब सम्पूर्ण नयाँ ढाँचा र बनावट विशेषता र शानदार मुद्दा संग काले कपडे मा गठन गरिएको छ। को अपेक्षाकृत शालीन बाह्य मापदण्डहरू बावजूद, सानो घर माज्दा-2 तरिकाले आराम चार वयस्क समायोजित गर्न सक्छन्। ट्रंक ठाउँ पर्याप्त कार वस्तुहरू र उत्पादनहरु भण्डारमा खरिद, तर कुनै थप ओसारपसार गर्न।
लागि ड्यासबोर्डमा विशिष्ट खेलाडी शैली छ। को डायल मूल चाँदी फ्रेम मा राखिएको सेतो डायल संग काले छन्। कार सवारी समयमा राती ड्यासबोर्डमा को अम्बर रोशनी मा उत्तेजित गर्दछ। को स्टेरिड़ स्विच बनेको, ती सबै काला सन्दर्भमा।
विशिष्ट शब्दहरू कार माज्दा-2 को शक्ति योग्य हुनुहुन्छ। निम्न कार को प्राविधिक विशेषताहरु।
उहाँलाई लागि प्रमुख प्रकार पेट्रोल इन्जिन MZR जसको मात्रा 1.5 लिटर छ, थियो। स्थापना 103 अश्वशक्ति विकास सक्षम र यसको अधिकतम टोक 135 एनएम छ। को पवरट्रेन लागि जाँदा, दुई विकल्प यसलाई प्रदान - पाँच-गति "संयन्त्र" र "स्वत:" चार कदम। प्रति 100 किलोमिटर इन्धन खपत पहिलो embodiment मा संयुक्त चक्र कार मा सञ्चालन गर्दा, 5.7 लिटर को एक औसत र दोस्रो - 6.8 लिटर। कार लागत कन्फिगरेसन मा निर्भर छ र 535 हजार rubles को एक चिन्ह साथ सुरु हुन्छ।
मुख्य लाभ जो माज्दा-2 आफ्नो पूर्ववर्ती देखि जन्मजात नयाँ संस्करण हो, सुरक्षाको उच्च स्तर थियो। व्यापक दृश्यात्मक साथै, कार उत्कृष्ट maneuverability र ह्यान्डलिङ दावा। पनि सुसज्जित कुशल ब्रेक परिमार्जन एम्पलीफायर संग कार को सरल कन्फिगरेसनमा। यसको उद्देश्य भने, आपतकालीन मा, चालक छैन ब्रेक पेडल धक्का पर्याप्त बलियो छ, प्रणाली स्वचालित रूपमा निर्वात बूस्टर सीमा छ जो मान, आफ्ना कार्यहरू शक्ति बढ्ने छ। मिसिन को मानक संस्करण पनि पछिल्लो बच्चा सीट मा माउन्ट गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ जो ABS, EBD, छ airbags र बन्धन ISOFIX सामेल छन्।
कार ध्वनि संकेत, र आफ्नो मिसिन मा स्थापित एक सिङ के हो?
निसान टाइटन - विशेष गरी बलियो मानिसहरू लागि
"Nokian Nordman 5": समीक्षा। जाडो टायर Nokian Nordman 5: विवरण
सेतो चर्च को रूप परिवर्तनको चर्च शहर
आकर्षण Noginsk: तस्बिर र समीक्षा
आंत्र क्यान्सर धेरै बाँच्न? पूर्वानुमान: बाँच्न बाँकी छ कति
रूस को dirtiest शहर: र्याङ्किङ्ग
कोमल Gardenia चमेली: घर मा हेरविचार
एक कर्मियों व्यवस्थापन कार्य रूपमा प्रेरणा
फोबियास - यो के हो? मानव फोबियाको प्रकारहरू
पर्ल नदी बगैचा होटल4(चीन / हाइनान।): विवरण र समीक्षा